Instagram မှာ Business Run မယျဆိုရငျဘာတှလေုပျသငျ့လဲ? -
Facebook ဟာ Business ပိုငျးမှာ နံပတျ(၁) Social Networking Platform ဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ Instagram ဟာလညျး Facebook Inc ကပိုငျဆိုငျတဲ့ လူသုံးမြားတဲ့ Social Networking Platformတဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျ Instagram ဟာနစေ့ဉျအသုံးပွုသူ 400 Million ရှိနပွေီးဖွဈပွီး၊ IGTV Apps ဟာဆိုရငျလညျး ကောငျးမှနျတဲ့ရလဒျတှနေဲ့ရပျတညျနပေါပွီ။
Instagram မှာ သငျ့ရဲ့လုပျငနျးကို ရလဒျကောငျးတှရေရှိလိုပွီး လူအမြားဆီကိုအမွငျ့ဆုံး Performance နဲ့ ပွနျနှံ့စလေိုပါက Instagram မှာ သငျ့လုပျငနျးအတှကျ Engagement Rate ကို Boost လုပျနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ Engagement Rate ကို ဘယျလောကျထိလုပျနိုငျမလဲ ဆိုတာကို သုံးသပျကွညျ့လို့ရနိုငျပါတယျ။ Instagram မှာ အောငျမွငျတဲ့လမျးကွောငျးဖွဈစမေဲ့အခကျြမြားကိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ……
သငျဟာ ပွိုငျပှဲ(သို့မဟုတျ) ပွေးလမျးတဈခုကိုပွေးနပွေီဆိုရငျ စညျးမဉျြးစညျးကမျးကို လိုကျနာရမှာအမှနျပငျဖွဈပါတယျ။ ထိုနညျးတူပဲ Instagram မှာလညျးသငျဟာ လုပျငနျးတဈခုလုပျနပွေီဆိုရငျ Instagram ရဲ့စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေိုလိုကျနာဖို့ မမပေ့ါနဲ့။ သငျဟာ Instagram ရဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို လိုကျနာပွီး အလုပျလုပျနိုငျမယျဆိုရငျတော့ သငျ့လုပျငနျးအတှကျကောငျးမှနျတဲ့ အခကျြတဈခကျြဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
ယခုလိုတိုးတကျနတေဲ့ ခတျေကွီးထဲမှာ လလေ့ာစရာတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ၊ ဒီလိုလလေ့ာစရာတှအေမြားကွီးရှိတဲ့ကွားထဲမှာမှ အောငျမွငျနတေဲ့ Instagram Marketer တှကေိုလလေ့ာကွညျ့ပါ။ သူတို့တှေ ဘာကိုလလေ့ာနကေသြလဲ ဘယျလိုလလေ့ာကသြလဲဆိုတာတှကေိုပါ။
၃. ကိုယျရဲ့ Post ဟာ Follower တှရေဲ့အခြိနျကိုမကုနျပါစနေဲ့
သငျ့ Instagram Newsfeed မှာတငျထားတဲ့ Post တှဟော သငျ့ရဲ့ Follower တှရေဲ့အခြိနျတှကေိုအလကားမဖွဈပါစပေါနဲ့။ သငျတငျလိုကျတဲ့ Post ဟာ သငျ့ရဲ့ Follower တှအေတှကျအကြိုးအမွတျရရှိခဲ့မဲ့ဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ Post တှကေို နောကျအကွိမျတှမှောကွညျ့ဖို့ ဝနျလေးမှာမဟုတျတော့ပါဘူး။ သငျ့ဟာ Followerတှရေဲ့ Engagement ကိုရရှိထားပွီဆိုရငျတော့ နောကျပိုငျးမှာ အောငျမွငျတဲ့ Instagram လမျးကွောငျးကိုလြှောကျလှမျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
၄. Promotion လေးတှလေုပျပေးပါ
သငျဟာ Follower တဈထောငျ(သို့မဟုတျ) တဈထောငျမပွညျ့ဘူးဆိုရငျ သငျဟာ နစေ့ဉျ Post တဈခုတငျရုံ နဲ့ လုပျငနျးအောငျမွငျဖို့အတှကျမလုံလောကျပါဘူး။ သငျ့ရဲ့လုပျငနျးအတှကျ Cross – Promote လုပျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒီလို Cross – Promotion လေးတှပွေုလုပျပေးမှသာ Instagram မှာ သငျ့ရဲ့လုပျငနျးကိုလူသိမြားလားပွီး နောကျပိုငျး Engagement အမှနျတှရေရှိလာပွီး အောငျမွငျတဲ့လုပျငနျးတဈခုဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ယခုအကွံပွုခကျြမြားကို လလေ့ာပွီး Instagram မှာသငျရဲ့ လုပျငနျးတှကေိုအောငျမွငျစှာလုပျကိုငျနိုငျပွီး၊ Followers တှရေဲ့ Engagement ကိုထိထိမိမိရရှိနိုငျအောငျလုပျဆောငျနိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Instagram မှာ Business Run မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ?
Facebook ဟာ Business ပိုင်းမှာ နံပတ်(၁) Social Networking Platform ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Instagram ဟာလည်း Facebook Inc ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ လူသုံးများတဲ့ Social Networking Platformတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Instagram ဟာနေ့စဉ်အသုံးပြုသူ 400 Million ရှိနေပြီးဖြစ်ပြီး၊ IGTV Apps ဟာဆိုရင်လည်း ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ရပ်တည်နေပါပြီ။
Instagram မှာ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို ရလဒ်ကောင်းတွေရရှိလိုပြီး လူအများဆီကိုအမြင့်ဆုံး Performance နဲ့ ပြန်နှံ့စေလိုပါက Instagram မှာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Engagement Rate ကို Boost လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ Engagement Rate ကို ဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ Instagram မှာ အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်စေမဲ့အချက်များကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်……
သင်ဟာ ပြိုင်ပွဲ(သို့မဟုတ်) ပြေးလမ်းတစ်ခုကိုပြေးနေပြီဆိုရင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာရမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူပဲ Instagram မှာလည်းသင်ဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေပြီဆိုရင် Instagram ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ သင်ဟာ Instagram ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ယခုလိုတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ လေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ ဒီလိုလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိတဲ့ကြားထဲမှာမှ အောင်မြင်နေတဲ့ Instagram Marketer တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ သူတို့တွေ ဘာကိုလေ့လာနေကျသလဲ ဘယ်လိုလေ့လာကျသလဲဆိုတာတွေကိုပါ။
၃. ကိုယ်ရဲ့ Post ဟာ Follower တွေရဲ့အချိန်ကိုမကုန်ပါစေနဲ့
သင့် Instagram Newsfeed မှာတင်ထားတဲ့ Post တွေဟာ သင့်ရဲ့ Follower တွေရဲ့အချိန်တွေကိုအလကားမဖြစ်ပါစေပါနဲ့။ သင်တင်လိုက်တဲ့ Post ဟာ သင့်ရဲ့ Follower တွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Post တွေကို နောက်အကြိမ်တွေမှာကြည့်ဖို့ ဝန်လေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ သင့်ဟာ Followerတွေရဲ့ Engagement ကိုရရှိထားပြီဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်းမှာ အောင်မြင်တဲ့ Instagram လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄. Promotion လေးတွေလုပ်ပေးပါ
သင်ဟာ Follower တစ်ထောင်(သို့မဟုတ်) တစ်ထောင်မပြည့်ဘူးဆိုရင် သင်ဟာ နေ့စဉ် Post တစ်ခုတင်ရုံ နဲ့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်မလုံလောက်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် Cross – Promote လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို Cross – Promotion လေးတွေပြုလုပ်ပေးမှသာ Instagram မှာ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူသိများလားပြီး နောက်ပိုင်း Engagement အမှန်တွေရရှိလာပြီး အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ယခုအကြံပြုချက်များကို လေ့လာပြီး Instagram မှာသင်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး၊ Followers တွေရဲ့ Engagement ကိုထိထိမိမိရရှိနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Saturday February 2nd, 2019/ Blog/0Comment